Gakava pamusoro pechivi chekutanga -- Hupombwe kana kuti muchero maapura?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Gakava pamusoro pechivi chekutanga -- Hupombwe kana kuti muchero maapura?
Gakava pamusoro pechivi chekutanga -- Hupombwe kana kuti muchero maapura?
Pane maonero maviri anopikisana pamusoro pechivi chekutanga. Maonero ekutanga anoti Adamu nemukadzi, akazodaidzwa kuti Eva, vakadya muchero – vamwe vanoudaidza kuti apura. Mumwe muonero unoti chivi chekutanga chaive hupombwe.
Chidzidzo chino chichaedza kuburitsa pachena kuti kuziviswa kwekusangana pabonde kwakakanganisa zano raMwari rehupenyu husingagumi muEdeni.
Kutaura kunotsigira kudyiwa kwemuchero kuchave muruvara rweyero.
Mozocherechedza pamagumo kuti muchabuda nezvipi.
Tinotanga nevhesi reBhaibheri rinotaura kuti Kaini haasi mwanakomana waAdamu.
I JOHANE 3:12 Tisingaiti saKaini, wakanga ari [mwanakomana] wowakaipa,
Hakuna Magwaro anoti Kaini mwanakomana waAdamu.
Hakuna vhezheni reBhaibheri revhesi riri pamusoro apa rinoti Kaini “akaberekwa” newakaipa. Ndapota musaise mamwe mazwi anoshandura zvirikuda kurehwa nevhesi iri.
Tichiverenga mutsara wemazita emadzitateguru aJesu kunaRuka, vakashandura chitauro vakatora kutaura kwekuti “Aive ari waJesse” vakawedzera “mwanakomana” (mumabhii akarereka) kuti zvive nyore kuverenga, nekuti ndizvo zvazvinoreva. Saka kuti “aive wa” zvakafanana nekuti “mwanakomana wa” muMagwaro.
RUKA 3:32 Waive ari waJese, (pakutanga)
RUKA 3:32 Waive ari (mwanakomana) waJese (zvakawedzerwa nevakaturikira Bhaibheri reKing James Vhezheni)
RUKA 3:32 Waive ari (mwanakomana) waJese (Izvi zvinounza chirevo chaicho chezvinoreva kutaura uku).
I JOHANE 3:12 Tisingaiti saKaini, wakanga ari wowakaipa,
Saka zvinogona kunyorwa seizvi
I JOHANE 3:12 Tisingaiti saKaini, wakanga ari (mwanakomana) wowakaipa,
Nekuti ndizvo zvazvinoreva chaizvo.
Hakuna kumwe kwazvakanyorwa zviri pachena pamusoro pababa vaKaini, mwana wemunhu wekutanga, muBhuku raMakoronike.
Kaini akasiiwa kunyorwa nezvake muBhuku raMakoronike, zvisinei nekuti aive ndiye dangwe rerudzi rwevanhu. Izvozvo zvega zvakakwana kuti tifungire zvimwe pamusoro pake.
Kaini ndiye munhu chakavanzika sezvo kusina rimwe vhesi rinoburitsa pachena kuti baba vake vaive ani.
Magwaro anotaura kuti Kaini mwanakomana waAdamu. (Genesisi 4:1)
“Kutaura” hakusi kureva kwekuti chitori chokwadi asi kungoreva zvinokuitirai.
Asi kune mamwe maonerowo anokwanisa kushanda ipapo.
2 Akazopo­nazve munun’una wake Abero.
Kuzivana kumwechete kwemurume nemukadzi pozvarwa mapatya.
Eva haana kutaura kuti aive awana Kaini kubva kuna Adamu.
Asi Mwari ega ndiye anopa hupenyu. Saka akataura chaizvo pakuti hupenyu hwaKaini hwaive hwabva kuna Mwari. Nei asina kuti Adamu ndiye baba vake? Nekuti aive asiri baba vake. Mhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka ndiyo yaive baba vake.
Kuzivana kwemurume nemukadzi zvinoreva kusangana pabonde. Adamu akaziva mukadzi wake kamwechete. Vana vaviri vakazvarwa, mapatya.
Asi Eva aive atobata mimba paakatongwa naMwari. Aive atova nemimba yemhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka.
GENESISI 3:16 Kumukadzi akati, "Ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako nokutora mi­mba kwako
Eva aiva nemukana wake wekutaura kuti Adamu ndiye aive baba vaKaini. Asi haana kubvira ataura izvozvo.
Adamu anodaidzwa kuti mwanakomana waMwari.
RUKA 3:38 Mwanakomana waEnosi, mwanakomana waSeti, mwanakomana waAdamu, mwanakomana waMwari.
Adamu semwanakomana waMwari, haagoni kuva wakaipa, Diaborosi.
Ichokwadi kuti muTestamente Itsva Adamu akadaidzwa kuti mwanakomana waMwari. Zvinotiita isu tese vana vaMwari. Sezvo tese tiri vana vaAdamu. Asi tinoona kuti vamwe vedu vakazova vakaipa.
Adamu aive asiri mutsvene. Tingati, ndiye chikonzero nei vana vake vese vakatora nhaka yezvivi, kusarurama, nerufu. (VaRoma 5:12)
Hakuna Rugwaro runotaura pamusoro pemunhu mumwechete sewakaipa kunze kwekunge Satani apinda mumunhu iyeye.
Handifungi kuti zvinotenderwa neMagwaro kuti tidaidze mumwe munhu kuti “wakaipa”. Munhu mumwe angagamuchirwe pakudaidzwa uku ndiJudasi. Asi Satani aive apinda muna Judasi. Zvimwechetezvo zvichaitika nemuchinda wekupedzisira antikristu.
“Wakaipa” ndiko kudaidza Diaborosi kuri pachena.
I JOHANE 2:13 Ndinokunyorerai, madzibaba, nokuti munoziva iye wakanga aripo kubva pakutanga. Ndinokunyorerai, majaya, nokuti makakunda wakaipa.
Madhimoni akasarudza kupinda munguruve paGedara.
Madhinomi haaigona kuzvisikira miviri, asi aifara kugara mumhuka dzaivepo kare.
Mweya yakaipa haigoni kuzvisikira miviri. Mwari ega ndiye anogona kusika. Mweya yakaipa inopinda mumiviri iripo kare yevanhu kana mhuka.
“Wakaipa” zvinotaura pamusoro paDiaborosi anova mweya usingaonekwe. Asi kuti anyengere Eva uye kuti ataure naye akapinda mumhuka yakazotukwa ikashanduka kuita nyoka, mhuka yaive pamusoro pezvipfuwo zvese, kuti aonekwe.
Rusifa aive mutumwa kana ngirozi yepamusro soro kusvikira atadza. Mwari akabva amutuka akamushandura kuita Diaborosi.
Mhuka yakashandurwa kuitwa nyoka yaive mhuka yepamusoro pezvipfuwo zvese yaive nemano yaive pakati pekuva munhu uye mhuka (yanano isipo nekuda kwekuti hakuna kuzova nemarangwanda emhula iyi). Yakashandiswa naSatani kuzivisa chivi, Mwari akatuka mhuka iyi akaishandura kuiita nyoka.
Mweya haugoni kusangana pabonde nekuti hauna ropa. Ropa rinokonzeresa nhengo yemurume kuti imire.
Vanhu vemweya havagoni kusangana pabonde asi vanhu vemweya vanogona kuonekwa sevanhu chaivo. Vanowanzoonekwa vari mumiviri yevanhurume. Vanogona kudya kana kurara (Genesisi 18:1,8; 19:3-4).
Mweya haigoni kusika miviri yevanhu. Mwari ega ndiye anosika.
Vanhu vatatu ava vaive Mwari nevatumwa vaviri mumiviri yevanhu. Mwari anogona kusika miviri yevanhu. Madhimoni haagoni.
GENESISI 18:1 Zvino JEHOVA wakazviratidza kwaari pamiti yemiouki yeMa­mure, agere pamusuo wetende masikati zuva richipisa;
2 Akasimudza meso ake, akatarira, akaona varume vatatu vamire vakatarisana naye; akati achivaona, aka­bva pamusuo wetende, akamhanya ku­ndosangana navo, akakotamira pasi,
3 Akati, "Ishe wangu, kana ndawana nya­sha kwamuri, musapfuura henyu pamura­nda wenyu.
Aive Mwari nevatumwa vaviri sezvo Abrahama aizodaidza Mwari ega kuti “Ishe”.
Mwari, mumuviri wemunhu, akaprofita pamusoro peMwanakomana waAbrahama pazera raive risisatarisirwi nenjere dzedu vanhu kuti ringabereka.
Hakuna mweya wakaipa waigona kuita izvi.
GENESISI 18:10 Iye akati, "Zvirokwazvo, kana gore rapfuura, ndichauyazve kwa­muri, nenguva iyo Sara, mukadzi wako, achava nomwanakomana." Zvino Sara akanga achiteerera ari pamusuo wetende shure kwake.
GENESISI 18:12 Sara akaseka mumoyo make akati, "Ini ndingazvifa­rira here zvandachembera, naiye tenzi wangu akwegurawo?"
Sara aiziva kuti izvi panyama zvaive zvisingagone kuitika kwaari naAbrahama.
GENESISI 18:13 JEHOVA akati kuna Abrahama, "Sara wasekereiko, achiti, `Ko ini muchembere ndichabereka mwana zvirokwazvo here?'
Akakwanisa kuziva ndangariro dzemoyo waSara kunyangwe aive mutente raive mumashure maMwari. Ichi chaive chiratidzo chaMessiasi nekuti Jesu akakwanisa kuziva zvaive mundangariro dzevanhu makore 1900 akadarika.
Mwari akabva aprofita kuparadzwa kweSodoma. Madhimoni haagoni kuprofita zviitiko zvikuru. Mwari ega ndiye anoziva zvichauya ramangwana.
Ava vaive vasiri madhimoni aizviitira miviri. Madhimoni haana simba rekusika rakadaro. Uyu aive Mwari akazvisikira muviri wemunhu kuti anotaura naAbrahama. Mwari akasikirawo vatumwa vake vaviri miviri yevanhu.
GENESISI 18:22 Zvino vaya varume vakabva, va­kaenda Sodoma; asi Abrahama aka­ramba amire pamberi paJEHOVA.
GENESISI 19:1 Vatumwa vaviri vakasvika So­domu madekwana;
Vatumwa vaviri vaive mumiviri yenyama.
Vatumwa vanokwanisa kusangana pabonde here? Hongu zvichibva kuna Genesisi 6:2,4. Ndizvo zvakaitika nguva yakadarika.
GENESISI 6:2 Vanakomana vaMwari vakaona vakunda vavanhu kuti vakanaka, vaka­zvisarudzira pakati pavose vavakada kuva vakadzi vavo.
Munoturikira Rugwaro urwu musina kurupima nemamwe Magwaro.
Munoti ngirozi vanakomana vaMwari. Hakuna Magwaro anotaura kudaro.
Muri kutaura kuti ngirozi dzinogona kuzviitira miviri yevanhurume asi hakuna Magwaro anotaura izvozvo. Vatumwa havagoni kusika.
Munoti vatumwa kana ngirozi dzinotadza. Hakuna Magwaro anotaura izvozvo.
Kwakaitika kupanduka kwengirozi pakutanga. Vatumwa vakarasika vakashandurwa kuitwa madhimoni. Vatumwa vakanaka havana kubvira vatadza pavakaona murango wakapihwa ngirozi dzaive dzatadza, havaizova mapenzi votadza sezvo vaizoita kuti Mwari avaite madhimoni.
VAHEBERU 1:5 Nokuti wakambotaura kunani wavatumwa, achiti: Ndiwe Mwanakomana wangu, Nhasi ndakubereka? Vuye zve: Ndichava Baba vake, Iye uchava Mwanakomana wangu?
Mwari haana kubvira aita hukama hwaBaba nemwanakomana nevatumwa kana ngirozi. Vanakomana vaMwari zvinomiririra vanhu vakanaka pamberi paMwari.
VAFIRIPI 2:15 Kuti muve vanhu vasina chavangapomerwa, navasina kusarurama, vana vaMwari vasine mhosva pakati porudzi rwakakombama, rwakatsauka, rwamunopenya pakati parwo semwenje panyika;
Seti aive mwanakomana waAdamu naEva. Munhu akakwana.
Kaini aive munhu mwana wemhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka aitaridzi semunhu. Vanasikana vake vaive verudzi rwemusanganiswa.
Vana vevanhu vakakwana vaSeti vakatanga kuroorana nevanasikana vaKaini vaive verudzi rwemusanganiswa, zvakaita kuti vanhu vose vave musanganiswa.
Kukanganisa kukuru kunoitwa nemakereke ndekwekuti dzaive dzisiri ngirozi dzemweya unoshamisa dzakaroorana nevanhu nekuti ngirozi hadzigoni kuita zvekusangana pabonde uye ngirozi hadzitadzi. Ngirozi dzakatadza pakutanga dzakadzingwa kuDenga naMwari pakutanga chaipo.
Mhuka yakazotukwa ikashandurwa kuitwa nyoka yaive iri pasi pekurudziro yaSatani ndiyo yaive mhuka yepamusoro-soro kukunda dzese yakarara naEva. Ndiyo nzira yakapinda nayo hunhu hwemhuka murudzi rwevanhu zvotsanangura kuti nei vanhu vachiita hunhu hwakaipa kwazvo.
Mbeu yemukadzi yaive Kristu, munhu asina munhu anonzi baba vake.
Mbeu yemhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka aivewo munhu asina munhu anonzi baba vake. Munhu mumwechete uyu ndiKaini. SaDiaborosi, Kaini ainyepa achiuraya kubva pakutana.
JOHANE 8:44 Imi muri vababa venyu Dhiabhorosi munoda kuita kuda kwakaipa, kwababa venyu iye wakanga ari muvurai kubva pakutanga, haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamuna zvokwadi. Kana achireva nhema, unoreva zvake nokuti ndiye wenhema vuye baba vadzo.
GENESISI 3:1 Zvino nyoka yakanga ina mano kupfuura mhuka [chaiyat] dzose dzesango.
Mhuka dzinorarama dzine ropa rinopisa, kwete madzvinyu.
Munoziva kuti Bhaibheri rakanyorwa muchiHeberu hwete chirungu. Shoko rekutanga chairo rechiHeberu rakaturikirwa rekuti “mhuka” muvhesi riri pamusoro nderekuti “chaiyat”
Chaiyat zvinoreva zvese zvinorarama muhushe hwemhuka. Chaiyat rakatorwa pazwi rekuti “Chayah” zvinoreva kuti hupenyu.
Ndizvo chaizvo. Pazvese zvinorarama muhushe hwemhuka, mhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka ndiyo yaive mhuka yepamusoro-soro pamusoro pemhuka dzese. Mhuka dzinoberekana nekusangana pabonde. Saka mhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka yaiziva kuti younza sei hupenyu panyika nekusangana pabonde.
Asi hapana pakati pemhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka naEva aiziva pamusoro pekubereka kwemhandara raive zano raMwari kuvanhu.
Rangarirai, hupenyu husingagumi haugoni kubva kumubereki kuenda kumwana kupfurikidza kuberekwa nekusangana pabonde.
Mhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka yaive isiri nyoka pakutanga sezvo yaive iri mhuka yepamusoro-soro, pakati pemhuka huru nemunhu. Yaive yakakura. Ndipo pakabva mbeu yevanhu vemusanganiswa vane mhumhu muhombe.
Mwari akatuka mhuka iyoyo akaishandura kuiita nyoka. Ndicho chikonzero pane yanano isipo nekuti marangwanda ayo akashanduka pakushandurwa kwayo.
Mhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka nenyoka zvinotaura chinhu chimwechete.
Nyoka ndiyo kutukwa kwemhuka huru yaive nemano kwazvo. [muBhaibheri redu rechishona hamuna kushandiswa izwi rekuti sepenti rinoreva mhuka yakazotukwa ikaitwa nyoka.]
Mhuka yakazoshanduka kuita nyoka yakatukwa kubva pakuva mhuka huru ikazova pasi pemhuka dzese nekushandurwa kuitwa nyoka kana kufananidzwa nemadzvinyu enyika.
Izvozvi inofamba nedumbu rayo zvaive zvisina kudaro chivi chisati chauya.
Senyoka Mhuka yakashanduka iyi yakapihwa rurimi rwakaita seforoko mucherechedzo wekuti yakataura chikamu chechokwadi chikamu chemanyepo.
Pazuva retatu Mwari akataura kuti muti wese wemuchero waive wakanaka kudya. Kwaive kusina apura rakaipa. Hakuna muchero unokura mumuti wakarambidzwa kudyiwa.
Ichokwadi kuti kwaive kusina muti wakaipa panguva iyoyo. Kaingova nemuchero mumwechete waive watsaurwa naMwari waakaudza Adamu kuti asadya (Genesisi 2:16-17).
Uyu ndiwo mubvunzo unopesana nemakereke.
Pamichero yese, michero ipi yakanaka yakanzi naMwari vanhu vasadya nekuda kuedza kuterera kwevanhu asi achiona kuti hakuna muchero unobereka pamuti ungavakuvadza?
Kereke haigoni kudaira mubvunzo uyu saka havazivi kuti kuita kwekusaterera kwekutanga kwaive kudii.
Kuranga mukadzi kupfurikidza kuzvara mwana hausi murango wakanaka unouya kana munhu adya apura risiro.
Kuunza murango werufu kwakatoipisisawo kana chitadzo chaingova kudya apura.
Adamu akararama makore 930. Saka Mwari aitaura pamusoro peZuva rake iye, kwete zuva redu isu rine maawa makumi maviri nemana.
Zuva raMwari = makore edu 1000.
Metusera ndiye akanyanya kurarama makore mazhinji, makore 969. Saka hakuna munhu akaberekwa nekusangana pabonde anorarama makore 1000 kana Zuva raMwari rimwechete.
Munhu wese, akaberekwa nekusangana pabonde, akafa mukati mezuva rimwe (makore edu 1000) raakabereka.
Muti woUpenyu waivewo pakati pemunda. Zvinoreva kuti paivewo nechimwe chinhu pakati pemunda pamwechete nawo.
Muti woUpenyu unopa hupenyu husingagumi.
Saka muti wehupenyu ndiwo mucherechedzo weMweya waKristu.
Hamugoni kuwana hupenyu husingagumi kumwe kunhu kunze kwaJesu Kristu.
Zvino mweya waSatani ndiwo muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa.
Kusangana pabonde chinhu chakanaka uye chakaipa. Chakanaka kana vanhu varoorana chakaipa kunze kwewanano kana kuti vanhu vasati vachata.
Munda mucherechedzo wemukadzi, nechitubu chake chehupenyu chinokwanisa kuunza mwana, chakavanzwa nekusimbiswa kuseri kwehumhandara hwake.
Pakati pemunda pakati pemuviri wemukadzi. Ndipo pane chibereko chake.
Chibereko chaEva chaikwanisa kushandiswa naMwari kuti abereke Jesu ari mhandara (muti wehupenyu) kana kushandiswa naSatani kuunza hupenyu kupfurikidza kusangana pabonde (muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa).
Kuzivana kwemurume nemukadzi ndiko kuzivikanwa kunoitwa kusangana pabonde nevakuru.
Vanhu vanoberekwa nekusangana pabonde musanganiswa wezvakanaka nezvakaipa. Vanhu vakanaka vanokwanisa kuva nekuipa mavari uye vanhu vakaipa vanokwanisa kuva nezvakanaka mavari.
Satani akapinda mumhuka huru yakazotukwa ikashanduka kuita nyoka yaive yakada kufanana kwazvo nemunhu (yanano isipo isingagoni kuwanikwa nevanhu vesainzi nekuti marangwanda ayo akabva ashanduka zvakazara) ikasangana pabonde naEva. Izvi zvakaita kuti mhuka yepamusoro-soro iyi ibvise humhandara hwaEva ikadeura ropa pakuita uku.
Ndicho chikonzero nei Mwari akati anoda kuti padeurwe ropa remhuka kuripira zvivi.
Mhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka yakavata nedumbu rayo pamusoro paEva, saka Mwari akaituka kuti igorarama ichifamba nedumbu rayo nekusingaperi nekuishandura kuiita nyoka.
Kuita uku kwakaunza kuwa kwerudzi rwevanhu.
Tichiri kuti munhukadzi atora mimba. Nei?
Hakuna chinhu chinodyiwa chinosvibisa munhu. Muchero unongopinda mumatumbu uchinobuda usina chakaipa chawaita.
MATEO 15:16 Iye (Jesu) akati: Nazvino nemi vo muchigere kunzwisisa here?
Mazwi atinotaura anokwanisa kusvibisa, kwete michero yatinodya.
MARKO 7:14 Akadanira zve kwaari vanhu vazhinji akati kwavari: Nditererei mose, munzwisise!
15 Hapanechinhu kunze kwomunhu chingamusvibisa, kana chichipinda maari; asi zvinobuda maari, ndizvo zvinosvibisa munhu.
Kana zvinodyiwa nemunhu zvisingagoni kumusvibisa, hazvirevi chinhu kuti titi kudya muchero wakatemhwa mumuti ndiko kwaive chikonzero chechivi. Mwari aizotuka sei vanhu vaviri kusvika parufu ivo vaive vasina kusvibiswa.
Nyaya yaitaurwa naJesu yaive yakasiyana nenyaya yemuchero mumunda weEdeni.
Nyaya ndiyo imwechete. Jesu aingotaura kuti kudya chimwe chinhu hachisi chivi. Uku kutaura kuri pachena pakukanganisa kunotendwa makuri nevanhu pamusoro pechivi chekutanga. Adamu naEva havana kusvibiswa nezvavakadya nemiromo yavo, vakasvibiswa nendangariro dzakaipa dzavakaita pamusoro peShoko raMwari.
Eva aifanira kubereka Mwana ari mhandara paaizozadzwa neMweya Mutsvene.
Akatadza kumirira nguva yaMwari akateerera imwe dzidziso. Akafunga kuti aikwanisa kuunza hupenyu nekushanda uye kutsungirira kwake sekunge aive mwari aikwanisa kusika mwana.
Kufunga uku, kwaive kwakasiyana neShoko raMwari, kwakabva maari ndiko kwakamusvibisa.
Jesu aigarotaura nemifananidzo yaishandisa micherechedzo yakasiyana kutsanangura chokwadi cheMagwaro.
Muti wehupenyu waive pakati pemunda ukazoenda kumabvazuva kwemunda.
Nzira yemuti? Miti haifambi. Jesu akati, “Ndini nzira”.
MaKerubi ingirozi dzakasarudzika dzinogarowanikwa dzakapoteredza Mweya waMwari.
II MADZIMAMBO 19:15 Ipapo Hezekia akanyengetera pamberi paJEHOVA, akati, "Haiwa! JEHOVA waIsiraeri, iye ugere pamusoro pamakerubi!
Saka muti wehupenyu waive Mweya waMwari waive nengirozi dzakaupoteredza.
Saka Muti weHupenyu hausi muti unomera uchikura. Asi muti ndicho chinhu chinorarama kwenguva refu zvakanyanya panyika saka ndiwo mucherechedzo wakanaka unonzwisisika wehupenyu husingagumi.
Kudya kunoisa chekudya mudumbu. Kusangana pabonde kunobereka mwana anokudza dumbu ramai.
Hupombwe hunofananidzwa nekudya. Kudya kunogutsa chido chemunhu. Zvimwechete nekusangana pabonde.
Hupombwe pakati paEva nemhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka. Kwete nemurume wake.
“Handina chakaipa chandaita”. Akanyengerwa zvekuti akatadza kutenda kuti aive aita chinhu chakaipa saka Mwari haana kutsanangura chivi chake achiti “Zvawaita...”
Mwari akatsanangurira mhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka zvayaive yaita zvakaipa.
Mbeu mucherechedzo wemwanakomana. Saka mhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka yaive nemwanakomana. Kaini.
Eva aive abata mimba. Mhuka yakazotukwa ikaita nyoka yaive yamupa mimba. Kurwadziwa pakuzvara mwana kwaizoratidza kusafara kwaMwari nekusangana pabonde.
Hapana kunzi “Zvawaita ...” hapana tsananguro. Nei mutongi akarurama asingatsananguri chikonzero chemutongo wake? Aive anyengerwa kwazvo zvekuti asazonzwisisa chaaive atadza.
Mukadzi mucherechedzo wekereke. Kereke yanhasi yakanyengerwa zvakanyanya kuti izive kuti chaive chivi chekutanga muEdeni chaive chii. Vanongoti kusaterera. Asi havagoni kutsanangura kuti chii chakaitwa pakusaterera.
Kusateerera kunobva pakuita chimwe chinhu. Makereke anotya kwazvo kana kuti ane kusaziva kukuru zvekuti havagoni kuudza vanhu chakaitika pakutanga kuti rudzi rwevanhu rwuwire muzvivi.
GENESISI 3:17 Kumunhu akati, "Zvawaka ...
Saka Mwari akatsanangurira Adamu zvaaive atadza.
Muchero muchembere wemwana. Mai ndivo muti wemuchero.
Erisabeta akataura naMaria:
RUKA 1:42 Akadana nenzwi guru, akati: Wakaropafadzwa iwe pakati pavakadzi, nechibereko chedumbu rako chakaropafadzwa!
Chii chinoshamisira pamuchero?
Muchero unokwanisa kuva mucherechedzo wemwana, asi unokwanisawo kuva mucherechedzo wemaitiro kana mabasa edu (Mapisarema 1:1-3) nyaya iripo ndiyo inozosarudza kuti chirevo chaicho ndechipi.
Chibereko chedumbu mwana (Genesisi 30:2). Kutaura kwaiwanzoshandiswa nevaIsraeri vakare.
Ichokwadi. Chibereko kana muchero zvinokwanisa kureva mwana kana zviito zvemunhu.
Edeni rinotiratidza zviito zviviri zvaikwanisa kubereka mwana.
Kuzivana kwemurume nemukadzi uye kubereka kwemhandara.
Hupenyu husingagumi hunogona chete kuwanikwa muna Kristu. Saka muzvirevo zvehupenyu husingagumi, kubereka kwemhandara chete ndiko kunokwanisa kubereka hupenyu husingagumi. Kuberekwa nekusangana pabonde, hakuna munhu anoberekwapo anosvitsa makore 1000.
Murango waEva, waaisanzwisisa ipapo, waibva pakusangana pabonde. Kubata kwake mimba kwakabereka hupenyu hunofa hunoperera murufu. Izvi zvakaratidzwa pakurwadziwa pakuzvara mwana. Rudzi rwevanhu rwaida muponesi, Mbeu yemukadzi. Kubereka kwemhandara kunodarikira chinhu chinonzi kusangana pabonde.
Kutora mimba kupi? Eva nemhuka yakatukwa ikazoita nyoka.
Zvino Mwari aizowedzera kubata mimba kunobva pakusangana pabonde. Vana vese vaizozvarwa nenzira iyoyo.
Pakupedzisira, pamagumo, kereke yakamutswa inozorarama makore 1000 erugare mumashure meAmagedhoni. Kana zvapera vachava vanhu vekutanga vanenge vararama makore 1000 saka, nekusikwa kubva muguruva naKristu mumiviri yavo yavanomuka nayo, vachave vakasunungurwa kubva pakutuka kwerufu kunofambidzana nekusangana pabonde.
Ndihwo huchava humbowo hwekupedzisira hwesimba raKristu pamusoro perufu.
GENESISI 1:11 Mwari akati: Nyika ngai­merese uswa nemiriwo inobereka mbeu, nemiti inobereka michero inamarudzi ayo, mbeu dzayo dziri mukati mayo, panyika; zvikaita saizvozvo
Mbeu iri mumuchero.
Mwari aida muti wemuchero (mai) kuti ubereke muchero (mwana) aive neShoko raMwari maari.
Tarisai zvakataurwa naMwari kuna Adamu naEva.
GENESISI 1:28 Mwari akavaropafadza, Mwari akati kwavari: Berekai, muwande,
Munofanira kubereka semiti yemichero.
Eva anofanira kuzadzwa neMweya Mutsvene obereka mwana anoberekwa nemhandara Jesu.
JOHANE 1:14 Shoko rakazova nyama, rikagara pakati pedu,
Zano raMwari muEdeni raive rekuti Jesu aizoberekwa okura otaura kudaidza vatsvene vake vose kubva kuguruva renyika (sezvaachaita pazuva raachamutsa vakafa).
Kwaizova nevanhu vakakwana kuti vazadze nyika. Pasina vakawandisa vanozovenga Mwari vorega kumuterera voguma vakugehena.
Adamu naEva vaifanira kumirira Mweya Mutsvene kuti ufambe.
Asi Eva akashaiwa kutsungirira akanyengerwa nemhuka huru yaive yakanaka pakuonekwa kwayo yaive yanano isipo pakati pemhuka nevanhu.
Pauro akanyorera kereke yekutanga.
3 Asi ndinotya kuti, senyoka yakanyengera Eva namano ayo
Pauro akataura pamusoro pemwenga ari mhandara. Zvino Eva, mwenga waAdamu, aive anyengerwa.
Mwari aive asisina dumbu remhandara kuti Mwanakomana wake Jesu aberekwe naro.
Zano raMwari raive raparadzwa.
Mwanakomana wake wekutanga aive Kaini, munhu ane mhumhu mukuru musanganiswa akabva pamhuka huru yakazotukwa ikashanduka kuita nyoka.
Saka apo Seti, mwanakomana waAdamu, paakabereka vanakomana vakaroorana nevanasikana vaKaini vaive vakakura mhumhu, vari musanganiswa rudzi rwevanhu rwese rwakatanga kuva vanhu vane mhumhu mikuru kwazvo nemajini emhuka mwari achibva aparadza izvi zvose muMvura yaNoa.
Hamuna hupenyu husingagumi mumusanganiswa wevanhu nemhuka.
GENESISI 1:24 Mwari akati: Nyika ngaibereke zvipenyu zvina marudzi azvo,
Rudzi rumwe nerumwe rwezvinorarama runofanira kuramba rwakapatsanurwa kubva kune rumwe. Hakufanirwi kuitwa musanganiswa.
Eva aifanira kubata mimba kamwechete kupfurikidza mweya Mutsvene.
GENESISI 3:16 Kumukadzi akati, "Ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako nokutora mi­mba kwako, uchabereka vana uchirwa­dziwa;
Eva aive abata mimba yaKaini kupfurikidza kusangana pabonde. Ndicho chaive chivi chekutanga. Aive asisiri mhandara. Mwari aizomirira makore 4000 asati awana mhandara Maria.
Mwari akawedzera kubata kwake mimba (muhumwechete zvichireva kuti aizoita vana vanodarika mumwechete kubva pamimba imwechete). MuEdeni, pachinzvimbo chekuti Jesu aberekwe nemhandara, vana vese vaizoberekwa nekusangana pabonde. Nyika yaizoita vanhu vakawandisa. Vanhu vakaipa vakaita saHitira vaizoberekwa vasingazowani nzvimbo kuDenga voenda kugehena.
Mamwe matambudziko ese anoyanana nekusangana pabonde akaita sehupombwe, zvirwere zvepabonde, mimba dzevana vaduku dzisingadiwi nezvimwe zvakadaro zvaizoomesa hupenyu panyika.
Mwari akabva aranga Eva nekurwadziwa pakuzvara mwana kuti ayeuke kuti kusangana pabonde yaive isiri nzira yaMwari. Hupenyu husingagumi haugoni kubva kumubereki kuenda kumwana kupfurikidza kuberekwa nekusangana pabonde.
Chandinetsa: “Ndatadza kuona kuti sei muine mafungiro aya ese uye nei zvinhu izvi zvese muchizvisanganisa”.
Rungori rudo rwekuziva kuti chivi chekutanga chaicho chaive chii chakazobereka mirango yakaipa kudaro. Zvakare, kunofanira kuwanikwa tsananguro kuMagwaro ese andataura nezvawo. Magwaro aya anofanira kuva chikamu chemusoro wenyaya wakadzama.
Mwari anokomborera zvinhu zvese zvinorarama nesimba rekusika kuti kusangova nemhuka mbiri chete dzerudzi rumwechete. (Genesisi 1:22)
Ichokwadi. Mhuka hadzina simba rekusarudza zvadzinoda pakurarama. Mwari anodzima rudo rwadzo rwekusangana pabonde muhadzi dzacho kunze kwenguva duku yadzinenge dziri nenhomba dzichipisa ropa. Kana mhuka dzakakwana dzaberekwa kuti dzizadze nyika, Mwari aizodzima zvachose rudo rwadzo rwekusangana pabonde.
Anokomborerawo vanhu kuti vazviberekere sezvaakaita pamhuka. (Genesisi 1:28) Saka kuberekana (nekusangana pabonde) zvaive zviri muhurongwa hwaMwari. Ndicho chikonzero chaakavasikira vari murume nemukadzi.
Kwete. Hupenyu husingagumi haugoni kuuya nekubereka kupfurikidza kusangana pabonde. Vanhu vakasiyana kwazvo nemhuka nekuti vane simba rekusarudza zvavanoda. Ndiwo musiyano uripo wakakura wemaitikiro ezvinhu.
Kana vanhu vane simba rekusarudza kuita zvavanoda vachirarama nekusingaperi, vangava nevana vangani? Nyika inozowandisa vanhu nekukasika. Kana vakaudzwa kuti vaite vana vashoma, vanenge vasisasarudzi zvavanoda vega.
Hamuna ropa muhushe hutsva. Pasina ropa hapana kusangana pabonde.
MATEO 22:30 Nokuti pakumuka kwavakafa havawani, kana kuwaniswa; asi vakaita savatumwa vaMwari kudenga.
Hakuna kusangana pabonde kudenga. Ngirozi hadzina kubvira dzaita zvepabonde uye hadzizosanganisirwi munezvepabonde.
Kuberekana kwevanhu kwaizosiyana zvachose nekwemhuka.
Munhu akasikwa kubva pasina. Mwari ndiMweya.
Saka Mwari akasika Adamu ari munhu wemweya.
Muviri wemunhu hauna kusikwa kubva pasina, wakaitwa kana kuumbwa neguruva renyika.
Nyama neropa hausi mufananidzo waMwari.
GENESISI 5:2 Wakavasika murume nomuka­dzi; akavaropafadza, akavatumidza zita rinonzi Munhu (Adamu), musi wavakasikwa.
Eva akasikwa ari hunhu hwechikadzi hwaive mumweya waAdamu wechirume.
SeMwenga waKristu aive hunhu hwevanhu hwaive muMweya waKristu kubva pakutanga.
Eva paaive achiri mumunhu wemweya Adamu, Mwari akavaudza kuti vaberekane vawande. Uku kuwanda kwemweya.
Izvi zvaireva kuti vaizomirira kuti vaiswe mumiviri yakasiyana yenyama vomirira kusvikira Mweya Mutsvene wafukidza Eva kuti abereke mwana Kristu aizozvarwa nemhandara. Aizokura pasina zvivi zvekufira. Aizodaidza vatsvene vake vane huwandu hwakakwanirana kubva kuguruva renyika.
MuChitsauko 2 Mwari akafemera mweya wemunhu mumuviri wenyama. Akabva abvisa hunhu hwechikadzi akahuisa mumuviri wenyama wemunhukadzi.
Uku kwaive kusiri kusika kubva pasina, kunova kuuya kwakaita mweya wemunhu.
Uku kwaive kuumba muviri kubva paguru raive rasikwa kare.
Vaive nenhengo dzekusangana nadzo pabonde nekuti havaizova nesimba rekuzvisarudzira kunze kwekunge vaive nemukana wekuita chimwe chinhu chakasiyana. Mwari haadi vanhu marobhoti vasina mukana wekuita zvakaipa. Mwari aida kuti vasarudzi sarudzo dzakanaka mumashure mekuvaudza kuti sarudzo dzakaipa dzaive dzipi.
Mwari aive akavafukidza nefuko rakayera zvekuti havana kuziva kuti vaive vakashama vasina kusimira. Vaive vasina rudo rwekusangana pabonde.
Mukadzi aive nehumhandara sechimwe chikonzero chekuvaudza kuti kuita zvepabonde kwaive kwakaipa.
Mumashure mekutadza kwavo ndipo pavakazoziva kuti vaive vasina kusimira.
GENESISI 3:10 Iye akati, "Ndakanzwa inzwi renyu mumunda, ndikatya, nokuti ndakanga ndisina kusimira, ndikahwanda."
11 Iye akati, "Ndianiko akakuudza kuti hauna kusimira? Wakadya kanhi muti wandakakuraira kuti urege kuu­dya?"
Kusangana pabonde kwakaita kuti vazive kuti vaive vasina kusimira. Kudya muchero hakungaiti kuti chero munhu azive kuti akashama.
Chivi chekutanga ndeapo Adamu naEva vakarega kuterera murairo waMwari.
Mhinduro isina zvainotiudza.
Vaive vasingatereri. Asi kusaterera kunoonekwa nekuita chimwe chinhu.
Chii chaicho chavakaita kuti vanzi havana kuterera Mwari?
Kuita ikoko kwaive kwakaipa kwazvo zvekuti kwakakohwa goho rerufu nekutambudzika.
Nekutaura kuti vakadya muchero usina kuipa, kereke inoratidzira pachena kuti haizivi zvachose zvinoreva micherechedzo inoshandiswa muBhaibheri. Kusagona kuturikira Magwaro kureva kuti havazivi kuti chivi chekutanga chaive chii.
Munofunga kuti zvinofadza vasingatendi here izvi?
Hazvishamisi kuti nei vachifunga kuti vanhu vanoenda kukereke vanhu vakawanda vanongotaura pamusoro pekudya muchero waisatenderwa sekamuedzo kekuti Mwari aone kuterera kwevanhu, achibva azoranga mukadzi pakuzvara mwana. Uye, zvakatoipisisa, akazotuka munhu wese nerufu.
Vasingatendi havazoiti rudo rwekunamata Mwari akadaro asina tsitsi.